Home∕खेल जगत∕हङकङमा भएको चाईना स्काई रनर नेशनल सीरिज़ २०१६को प्रतियोगिता नेपाली धावक उपेन्द्र सुनुवार प्रथम भएकाछन।
February 21, 2016 February 21, 2016 koselihk 0
उपेन्द्र सुनुवारले विश्वका धावकहरुलाई पछिपार्दै हङकङमा फेरि नेपाली झन्डा फहराएका छ्न।
२०फेब्रुअरी, हङकङको साईकुङमा चाईना स्काई रनर नेशनल सीरिज़ २०१६को प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। MSIG 50 प्रतियोगिताका धावकहरु मध्यमा नेपाली धावक उपेन्द्र सुनुवारले प्रथम स्थान हासिल गरेकाछन।
विश्वका धावकहरुलाई पछि पार्दै यसपटक हङकङमा फेरि नेपाली झन्डा फहराएका छ्न । Action Asia Events द्वारा आयोजित ट्रेल दौड र हाईकिङ क्याटगोरीमा १२ कि मी / २१ कि मी र ५० कि मी series अन्तर्गतको दौडमा साईकुङ स्थित पाक ताम चुङ पिकनिक गार्डन बाट सयौको संख्यामा विभिन्न देशका धावक धाविकाहरु दौडिएका थिए। त्यसैगरि मुख्य इभेन्टको रुपमा लिईएको ५० कि मी तर्फ पुरुष महिला गरि करिब 400 को हाराहारीमा प्रतियोगीहरु सहभागि थिए । उत्कृष्ट दौडने होडबाजीमा नेपालबाट आएका उपेन्द्र सुनारले उक्त स्काईम्याराथनमा प्रथम भए।
उनले निर्धारित दुरि ५ घण्टा ४१ मीनेट १० सेकेन्डमा पार गरेका थिए। त्यसै गरि फ्रान्सका Pierre andre Ferriere ले ५ घण्टा ४१ मीनेट २३ सेकेन्डमा र Baptiste Puyou ले ५ घण्टा ४२ मीनेट ३० सेकेन्डमा
मा पार गरि क्रमशः दोश्रो र तेस्रो बनेका थिए।
महिला तर्फ हङकङ निवासी न्युजिल्यान्डकि Marie Mcnaughton, युक्रेनकि Okasana Riabove र हङकङकि Ching Ling Lo ले निर्धारित दुरि ६:५८:३९ , ७:२३:५३, र७:२४:३६ मा पार गरि क्रमशः पहिलो, दोश्रो त तेस्रो स्थान हासिल गरे।
नेपाली बिजेता सुनुवारले ओभरअल चैम्पियन र उमेर क्याटगोरीमा समेतगरि हङकङ डलर $ ८५०० र उपहार प्राप्त गरेका थिए।
गत बर्षको स्काई रनिङ कन्टीन्न्टल प्रतियोगितामा एशियन च्याम्पियनसीप प्रतियोगितामा पुरुष समीर तामाङ र महिला मिरा राईले उपाधि हातपारेका थिए । भने यस पटकको जितले उनी युरोपमा हुने स्काई रनिङ वर्ल्ड सेरिजमा समेत छनौटहुन थप मद्दत पुग्नेछ ।
21Arrested during the protest against PM KP Oli visit in India.
त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको रात ????- निर शाह